Saraakiil sar sare oo iska casishay taliska Milatariga Turkey-ga – The Voice of Northeastern Kenya
Saraakiil sar sare oo iska casishay taliska Milatariga Turkey-ga
Wararka ka imaanaya waddanka Turkey-ga ayaa sheegaya in ay xilalka iska casileen 2 generaal oo ka mid ahaa saraakiisha sar sare ee taliska ciidamada Milatariga ee dalkaasi.
Generaaladaan ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen 4-ta sarkaal ee ugu muhiimsanaa golaha sare ee maamula ciidamada difaaca dalka Turkey-ga.
Tallaabada is casilaadda ah ee ay ku dhaqaaqeen saraakiishaasi ayaa timid xili la filayay in uu dhaco kulan ay taliska Milatariga dalka Turkey-ga doonayeen in ay uga arrinsadaan xoojinta maamulka Milatariga.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in 2-da Generaal ee maanta is casishay ay ka careysanyihiin talaabooyinkii ay dowladda Turkeyga qaaday markii uu dhawaan dalkaasi ka dhacay afgambigii Milatary ee dhicisoobay.
Dowladda Turkeyga ayaa wixii ka dambeeyay inqilaabka fashilmay 15-kii bishaan July waxa ay shaqada ka cerisay in ka badan 1,223 xubnood oo ka tirsanaa Milatariga, kuwaas oo ay ku jireen ilaa 87 Generaal.
Dhinaca kale xukuumadda Ankara ayaa albaabada isugu dhufatay qaar ka mid ah jaraa’idka kasoo baxa qeybo kala duwan oo ka mid ah dalka Turkey-ga.
Tallaabada ka dhanka ah xarumaha warbaahinta ayaa waxa ay dhinacyo badan ku tilmaameen caburin lagu sameynayo warbaahinta wadankaasi ka howlgasha.
← Booliska oo toogasho ku dilay 4 qof oo burcadnimo lagu tuhmay
Kenya oo ku baaqday in ganacsiga foolasha maroodiga xayiraad xoogan la saaro →
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo sheegtay inaan la ceyrin safiirkii soomaaliya February 17, 2019
Iiraan oo u yeertay safiirka Pakistan u fadhiya dalkeeda February 17, 2019
DHAGEYSO:Maamulka Gobolka Banaadir oo soo saaray digniin dhanka nadaafadda ah February 17, 2019
DHAGEYSO:Baaqyada ku aaddan midnimada shacabka Wajeer oo isa soo taraya February 17, 2019
Musalia Mudavadi oo ku baaqay in beesha caalamka ay xaliso muranka Kenya iyo Soomaaliya February 17, 2019
Sarkaal uu Trump magacaabay oo xilkaasi iskadiidday February 17, 2019
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo sheegtay inaan la ceyrin safiirkii soomaaliya
Iiraan oo u yeertay safiirka Pakistan u fadhiya dalkeeda
DHAGEYSO:Maamulka Gobolka Banaadir oo soo saaray digniin dhanka nadaafadda ah
DHAGEYSO:Baaqyada ku aaddan midnimada shacabka Wajeer oo isa soo taraya
Musalia Mudavadi oo ku baaqay in beesha caalamka ay xaliso muranka Kenya iyo Soomaaliya
Sarkaal uu Trump magacaabay oo xilkaasi iskadiidday